Phawula: Lesi sihloko asikhulumi ngezimo ezihlobene nobhubhane lwe-coronavirus (COVID-19). Hlola isihloko sethu sezimo ezingalindelekile ze-COVID-19 ukuze ufunde ngokuhlanganiswa kwezimo ezihlobene ne-COVID-19, futhi ikakhulukazi imikhawulo ehlanganiswe nokubhukha okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020.
Le nqubomgomo isebenza ekungeneni kuka-January 19, 2021 noma ngaphambi kwawo. Ngokungena kwangemva kwalolo suku, inqubomgomo evuselelwe etholakala ngezansi izosebenza.
Kusebenza kuze kube: u-January 19, 2021
Kungenzeka sikwazi ukukubuyisela imali noma sihoxise inhlawulo yokukhansela uma kudingeka ukhansele ngenxa yesimo esingalindelekile esingaphezu kwamandla akho. Ngezansi kunohlu lwezimo ezivikelwe Ngumthetho wethu Wezimo Ezingalindelekile. Ngaphambi kokuba ukhansele, hlola ukuthi isimo sakho sifakiwe ohlwini olungezansi nokuthi unganikeza amadokhumenti afunekayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukukhansela okungenazijeziso kutholakala kuphela ezimweni ezingalindelekile ezenzeka ngaphambi kosuku lokungena olusemthethweni ngokubhukha kwakho. Ngaphezu kwalokho, Umthetho wethu Wezimo Ezingalindelekile awusebenzi ekubhukheni kwe-Luxe noma kwe-Luxury Retreats, okungaphansiKwenqubo Yokubuyisela Isivakashi ye-Luxe eyehlukile.
Izimo ezidinga amadokhumenti
Ukufa kombungazi, kwesivakashi, noma komsizi wakhe, isivakashi esengeziwe, ilungu lomndeni eliseduze noma umnakekeli. Uzocelwa ukuba uhlinzeke ngelinye lalawa madokhumenti:
Isihloko sabezindaba esibalula umufi
Ukuhlatshwa ukugula okubucayi noma ukulimala okuthinta umbungazi noma ilungu leqembu labantu abasohambweni. Uzocelwa ukuba unikeze isitatimende esivela kudokotela esiqinisekisa ukuthi umuntu akakwazi ukubungaza noma ukuthatha uhambo ngenxa yokuhlatshwa ngukugula okungalindelekile, okubucayi noma ukulimala. Isitatimende kufanele futhi sibe nosuku lwangemva kokwenziwa kokubhukha futhi sinikezwe zingakapheli izinsuku ezingu-14 kusuka ekukhanseleni. Okwamanje, izimo ezivele zikhona ezaziwa umsebenzisi ngesikhathi sokubhukha azihlanganisiwe Emthethweni wethu Wezimo Ezingalindelekile.
Izibopho ezifunwa nguhulumeni ezihlanganisa ukuba yilungu labasizi bejaji, ukuvinjelwa kokuthatha uhambo, ukuvela enkantolo kanye nokwabelwa umsebenzi ebusosheni. Uzocelwa ukuba uhlinzeke ngekhophi yesaziso esingokomthetho esinosuku lwangemva kokwenziwa kokubhukha, kuhlanganise negama lomuntu ofeza isibopho.
Umonakalo ongalindelekile wendlu, ukulungiswa kwayo kanye nezinkinga zamasevisi endlini ye-Airbnb ezenza kungabi okuphephile ukubungaza izivakashi, noma okuvimbela izivakashi ekutholeni amasevisi ayisisekelo njengamanzi empompi. Lokhu akuhlanganisi ukulungisa okuhleliwe. Uzocelwa ukuba usinike wonke amadokhumenti alandelayo:
I-invoyisi yokulungisa okwenziwayo
Ukuphazamiseka kwezithuthi okwenza kungayeki endaweni yakho evakashelwayo, kuhlanganise nokuvalwa kwemigwaqo nokukhanselwa kwezindiza lapho kungekho khona ezinye izindlela zokuthatha uhambo. Lokhu kuhlanganisa ukuvalwa nokukhansela okubangelwe yizinhlekelele zemvelo, njengokuzamazama komhlaba noma iziphepho ezinkulu. Uzocelwa ukuba uhlinzeke ngesaziso sokuvalwa komgwaqo, noma amadokhumenti avela enkampanini yezindiza abonisa ukuthi indiza ikhanseliwe kanye namadokhumenti aqinisekisa ukuthi akunakwenzeka ukuthi uye endaweni yakho oyivakashelayo.
Ukukhanselwa kwezitimela, amabhasi noma imikhumbi lapho belungekho olunye uhambo olutholakalayo ngosuku olufanayo. Uzocelwa ukuba uhlinzeke ngamadokhumenti akhombisa ngokusobala ukuthi isithuthi besingasebenzi ngalolo suku, njenge-screenshot sewebhusayithi yenkampani noma ilinki yesitatimende esisemthethweni esivela esithuthini.
Awekho amadokhumenti afunekayo kulezi zimo, kodwa iqembu lethu elikhethekile lizohlola isicelo sosizo ngasinye ukuze liqinisekise ukuthi uthinteka ngokuqondile.
Izinhlekelele zemvelo, imisebenzi yamaphekula kanye nemibhikisho yezombusazwe/yezepolitiki evimbela isivakashi ukuya noma ukubuya endaweni evakashelwayo, noma eyenza kungaphephi ukubungaza izivakashi.
Isifo esiwumqedazwe noma ukugula okuthinta isifunda ngokuzumayo noma lonke iqembu labantu. Lokhu akuhlanganisi izifo ezivele zikhona ezihlotshaniswa nendawo—ngokwesibonelo, umalaleveva e-Thailand noma imfiva kadenga e-Hawaii. Noma yikuphi ukulungisa kuyinqubomgomo yethu maqondana nokuqubuka kwesifo, kanye nobubanzi bokusetshenziswa kwenqubomgomo, kuzonqunywa ngokususelwa ezimemezelweni ze-World Health Organization kanye neziphathimandla zendawo.
Ukuvinjelwa kohambo okubekwa nguhulumeni, i-ejensi yokusebenza komthetho, noma uphiko lwezempi olubeka imingcele yokuya noma ukusuka endlini noma endaweni yokokuzithokozisa.
Izeluleko zokusongelwa kokuphepha nokuvikeleka ezikhishelwe indlu noma indawo okusukelwa kuyo yomcimbi wesivakashi.
Izimfuneko zokushintshwa kwama-visa noma amaphasipoti ezenza ungakwazi ukuya endaweni ofuna ukuya kuyo. Lokhu akuhlanganisi amadokhumenti ohambo alahlekile noma aphelelwe yisikhathi.
Phawula: Umthetho Wezimo Ezingalindelekile ongezansi usebenza kukho konke ukungena kwangalolo suku noma kwangemva kuka-January 20, 2021. Kukho konke ukungena kwangaphambi kuka-January 20, 2021, Inqubomgomo ekhona njengamanje engenhla izoqhubeka nokusebenza. Ukusetshenziswa kwale Nqubomgomo ku-COVID-19 ngeke kushintshe lapho inqubomgomo entsha iqala ukusebenza ngo-January 20, 2021, futhi iningi lezimo ezihlobene ne-COVID-19 zizoqhubeka zingafakiwe.
Usuku okuqala ngalo ukusebenza: January 20, 2021
Lo Mthetho Wezimo Ezingalindelekile uchaza indlela ukukhansela okusingathwa ngayo uma kuvela izimo ezingalindelekile ezingaphezu kwamandla akho ngemva kokubhukha futhi zibangele ukuthi kungenzeki noma kungabi semthethweni ukuphothula ukubhukha kwakho. Le Nqubomgomo isebenza ekubhukheni kokubili izindawo zokuhlala Nokokuzithokozisa.
Lapho le Nqubomgomo ivumela ukukhansela, ilawula futhi ize kuqala kunenqubomgomo yokukhansela yokubhukha. Izivakashi ezithintwe isenzakalo esihlanganiswe yile Nqubomgomo zingakhansela ukubhukha kwazo futhi zithole, kuye ngezimo, ukubuyiselwa imali, ikhredithi yohambo, kanye/noma okunye ukucatshangelwa. Ababungazi abathintwe isenzakalo esihlanganiswe yile Nqubomgomo bangakhansela ngaphandle kwemiphumela emibi, kodwa, kuye ngezimo, amakhalenda abo angavalwa ngezinsuku zokubhukha okukhanseliwe.
Le Nqubomgomo isebenzisa igama elithi “Isenzakalo”ekubhekiseleni kulezi zimo ezilandelayo ezenzeka ngemva kokubhukha, ezingalindelekile ngesikhathi sokubhukha, futhi zivimbela noma zenqabela ngokomthetho ukuphothulwa kokubhukha.
Izinguquko ezimfunweni zikahulumeni zohambo. Izinguquko ezingalindelekile ezimfunweni ze-visa noma zephasipoti ezibekwe yi-ejensi kahulumeni ezivimbela uhambo oluya lapho uhlose ukuya khona. Lokhu akuhlanganisi amadokhumenti okuhamba alahlekile noma aphelelwe yisikhathi noma ezinye izimo zomuntu siqu ezihlobene nokugunyazwa kwesivakashi ukuba sithathe uhambo.
Izimo eziphuthumayo nemiqedazwe emenyezelwe. Uhulumeni umemezele izimo eziphuthumayo zendawo noma zikazwelonke, imiqedazwe, ubhubhane, kanye nezimo eziphuthumayo zezempilo zomphakathi. Lokhu akuhlanganisi izifo eziba sendaweni ethile noma ezivame ukuhlotshaniswa nendawo—ngokwesibonelo, umalaleveva e-Thailand noma imfiva kadenga e-Hawaii.
Ukuvinjelwa kohambo okubekwe uhulumeni. Izivimbelo zohambo ezibekwe yi-ejensi kahulumeni ezivimbela noma ezenqabela ukuya, ukuhlala, noma ukubuya endaweni Indlu ekuyo. Lokhu akuhlanganisi izeluleko zohambo ezingabophi kanye nesiqondiso esifanayo sikahulumeni.
Izenzo zamasosha kanye nobunye ubutha. Izenzo zempi, ubutha, ukuhlasela, impi yombango, ubuphekula, iziqhumane, ukuqhuma kwamabhomu, amambuka, iziyaluyalu, ukuvukela umbuso, izinxushunxushu zomphakathi kanye nezibhelu zomphakathi.
Izinhlekelele zemvelo. Izinhlekelele zemvelo, izenzo zikaNkulunkulu, ukushoda okukhulu kwezinsiza ezibalulekile, ukuqhuma kwezintaba-mlilo, ama-tsunami, nezinye izehlakalo zezulu ezinzima nezingajwayelekile. Lokhu akuhlanganisi isimo sezulu noma izimo zemvelo ezijwayeleke ngokwanele ukuthi zibonakale kusengaphambili kuleyo ndawo—ngokwesibonelo, iziphepho ezenzeka ngenkathi yeziphepho e-Florida.
Konke okunye. Le Nqubomgomo ivumela kuphela ukukhansela ngenxa Yezenzakalo ezichazwe ngenhla. Konke okunye akufakiwe. Izibonelo zezimo le Nqubomgomo engakuvumeli ukukhansela kuzo zihlanganisa: isifo esingalindelekile, ukugula, noma ukulimala; izibopho zikahulumeni njengomsebenzi wokuba umsizi wejaji, ukuvela enkantolo noma imisebenzi yezempi; ukwelulekwa kwezokuvakasha noma ezinye iziqondiso zikahulumeni (okungekona ukuvinjelwa noma ukwenqatshelwa ukuthatha uhambo); ukukhanselwa noma ukuhlelwa kabusha komcimbi obuwenzelwe ukubhukha; nokuphazamiseka kokuhamba okungahlobene Nesenzakalo esihlanganisiwe njengokuvalwa komgwaqo, kanye nokukhanselwa kwendiza, isitimela, ibhasi kanye nemikhumbi. Uma ukhansela ukubhukha kulezi zimo, inani elibuyisiwe lizonqunywa inqubomgomo yokukhansela esebenza ekubhukheni.
Uma sikwazisa noma sishicilela imininingwane eqinisekisa ukuthi le Nqubomgomo isebenza ekubhukheni kwakho, sicela ulandele iziqondiso zokukhansela esizinikezayo. Lapho sesikwazisile noma sishicilele imininingwane mayelana nokuthi le Nqubomgomo isebenza kanjani, kufanele ukwazi ukukhetha ukukhansela ngaphansi kwale Nqubomgomo ngokuya ekhasini elithi Uhambo bese ukhansela ukubhukha okuthintekile. Uma ukholelwa ukuthi le Nqubomgomo isebenza ekubhukheni kwakho, kodwa singakwazisanga noma sashicilela imininingwane mayelana nalesi Senzakalo, sicela uxhumane nathi ukuze ukhansele ukubhukha kwakho. Kuzo zonke izicelo zosizo, kufanele uzilungiselele ukusinika amadokhumenti akhombisa ukuthi Isenzakalo sikuthinte kanjani wena noma ukubhukha kwakho.
Ezinye izinto okufanele wazi ngazo
Le Nqubomgomo isebenza kukho konke ukubhukha okunosuku lokungena ngalolo suku noma ngemva kosuku eqala ngalo ukusebenza. Le Nqubomgomo ayisebenzi ekubhukheni kwe-Luxe, okungaphansiKwenqubo Yokubuyisela Isivakashi ye-Luxe eyehlukile.
Iya kokuthi Uhambo bese uthola uhambo ofuna ukulukhansela Chofoza noma uthephe okuthi Khombisa imininingwane yohambo Ukusuka ekubukeni konke…
Kuthiwani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yenkinga yendlu noma umbungazi?